Wasiirka arrimaha debadda Imaaraadka: Alshabaab & Burcad badeedu waxey la midyihiin Daacish – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Wasiirka arrimaha debadda Imaaraadka: Alshabaab & Burcad badeedu waxey la midyihiin Daacish * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka arrimaha debadda Imaaraadka: Alshabaab & Burcad badeedu waxey la midyihiin Daacish
By A warsame on 30th October 2014
Mareeg.com: Wasiirka arrimaha dibbadda dalka isku tagga Imaaraatka Carabta Sheikh C/llahi Bin Zayid Al-Nahyan oo ka hadlay shirka afaraad ee arrimaha burcad badeeda Soomaalida looga hadlayo ee dalkaas ka socda ayaa soo jeediyay in dawladaha caalamka ay xoojiyaan oo ayan marnaba joojin dagaalka ka dhanka ah Xarakadda Al-Shabab iyo kooxda burcad badeeda Soomaalida oo uu ku sheegay inay ka mid yihiin caqabadaha nabada Soomaaliya hortaagan.
Wasiir Sheikh C/llahi Bin Zayid waxaa uu sheegay in Al-Shabab iyo burcad badeeda ay dhibaato amaan ku hayaan badda iyo barriga Soomaaliya waxaana uu sheegay inay Soomaaliya ka dhigeen meel lama galaan ah, sidaas waxaa qoray sida saaka lagu qoray wargeyska Khaleej Times oo ka soo baxa Imaaraadka Carabta.
Wasiirka arrimaha dibbadda dawlada Imaaraatka Carabta waxaa uu Xarakadda Al-Shabab iyo burcad badeeda Soomaalida la meel dhigay inay la mid yihiin ururka Daacish ama IS ee hadda ka dagaalamaya wadamada Ciraaq iyo Syria.
Wuxuu soo jeediyey wasiirku in maraakiibta dagaalka ee joogaan biyaha Soomaaliya ay xoojiyaan gaaf-wareega badda si loo cirib tiri burcad badeeda iyo in la kordhiyo taageerida dawlada Soomaaliya si Al-Shabab loo burburiyo.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa gacan ka siisa dowladda Soomaaliya xoojinta ciidamada amaanka oo ay siisay gaadiid iyo qalab ciidan oo farabadan.
Sidoo kale, Imaaraadka Carabta ayaa qeyb ka ah weerada cirka ah ee xulafada Mareykanku ku hayaan dagaalyahanada Daacish ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq.